iOS को लागि SnapTube / iPhone / iPad
म्याकको लागि SnapTube
SnapTube अनुप्रयोग: सर्वश्रेष्ठ फ्री भिडियो डाउनलोडर
Snaptube Android को लागि सबै भन्दा राम्रो Youtube डाउनलोड अनुप्रयोग हो. यो नि: शुल्क Android अनुप्रयोग तपाईं YouTube भिडियो र अन्य भिडियो मञ्चहरूमा साइटहरु डाउनलोड गर्न मद्दत गर्छ, Dailymotion जस्तै, दाखको बोट, Vimeo, आदि. उदाहरण को रुपमा. Snaptube HD कम र पनि4हजार गुणस्तर प्रदान. त्यसैले, के तपाईं चाहनुहुन्छ कि भिडियो गुणस्तर चयन हुन सक्छ. Android को लागि सबै भन्दा राम्रो भिडियो डाउनलोडर रूपमा, Snaptube पनि अडियो डाउनलोड गर्न सम्भव छ. यो तपाईं एमपी -3 र M4A स्वरूप अडियो प्रदान गर्दछ.
SnapTube – एन्ड्रोइड उपकरणहरू लागि शीर्ष भिडियो डाउनलोडर
तपाईं YouTube बाट भिडियो हेर्न मन? तपाईंले केही YouTube च्यानल सदस्यता गर्छन् र च्यानलबाट भिडियो अपडेटहरू गुमाउन चाहँदैनन्?
YouTube मा आफ्नो मनपर्ने गायक संगीत भिडियो क्लिप डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ गर्छन्? वा तपाईंले हास्यास्पद भिडियो YouTube मा अफलाइन आफ्नो साथीहरूसँग डाउनलोड र हेर्न मन?
हाम्रो स्मार्टफोन अब छ कि अग्रिम प्रविधि संग, हाम्रो स्मार्टफोन वा ट्याबलेट बाट YouTube भिडियो हेर्न को लागि यो सम्भव छ. यसबाहेक, हाल स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको भनेर हामीलाई भिडियो हेर्न सुविधाजनक बनाउन एकदम ठूलो पर्दामा छ.
हामी इन्टरनेट जडान रूपमा लामो, हामी हाम्रो स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको YouTube भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जो यो मात्र लामो समय पहिले पीसी मा गर्न सकिन्छ. पनि, हामी हाम्रो Android उपकरणहरू देखि निःशुल्क YouTube भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छन्. के Android अनुप्रयोग भनेर तत्काल YouTube भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छन्?
यस लेखमा, हामी तपाईं निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Android उपकरणहरू लागि सबै भन्दा राम्रो YouTube भिडियो डाउनलोडर को एक बारेमा समीक्षा दिनेछु.
SnapTube के हो?
स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको हामी विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ देखि हाम्रो नयाँ मनोरञ्जन हो. जब हामी पट्टाइ लाग्ला, हामी सिर्फ हाम्रो फोन समातेर YouTube मा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ.
YouTube मा चयन गर्न कार्यक्रम धेरै संग एक टिभी जस्तै छ. हामी पनि के कार्यक्रम हामी यसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ कि चयन गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ कमेडी छन्, छोटो भिडियो, ट्रेलर, संगीत क्लिप र धेरै. YouTube मा सबै सामग्रीहरू हेर्न मुक्त छन्. तर तपाईंलाई YouTube मा भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छन् थाहा र अफलाइन हेर्नुहोस् गर्छन्? त्यसैले, तपाईं इन्टरनेट पहुँच छैन तापनि तपाईँ अझै पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ.
यो SnapTube छ – Android को लागि एक भिडियो डाउनलोडर आवेदन तपाईं निःशुल्क YouTube भिडियो डाउनलोड गर्न मद्दत.
SnapTube तपाईं सजिलै YouTube भिडियो डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईं आफ्नो ग्याजेटहरू मा भिडियो सुरक्षित र पछि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर, पनि इन्टरनेट जडान बिना. यस Android भिडियो डाउनलोडर आवेदन पनि धेरै शानदार सुविधाहरू प्रदान तपाईं अन्य भिडियो डाउनलोडर आवेदन मा पाउन सक्षम छैन शायद कि.
संग SnapTube आवेदन, YouTube बाट भिडियो डाउनलोड छरितो र सजिलो हुनेछ.
SnapTube आवेदन बारेमा साना समीक्षा
सबै भन्दा ठूलो भिडियो साइटहरु भिडियो धेरै समावेश रूपमा, यो धेरै मान्छे टिभी भन्दा YouTube हेर्न रुचि भन्ने कुरामा कुनै शंका छ. तर, किनकी हामी YouTube मा भिडियो स्ट्रिम गर्न इन्टरनेट पहुँच आवश्यक, हामी YouTube मा भिडियो स्ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ जब निःशुल्क वाइफाइ स्थान पाउन भने यो एकदम समस्या छ. त्यसैले, किन छैन हामीले भिडियो YouTube मा र पछि हेर्न डाउनलोड?
SnapTube अनुप्रयोग Android को लागि सबै भन्दा राम्रो भिडियो डाउनलोडर अनुप्रयोगहरू रूपमा यसको लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ. मान्छे को लाख यसलाई डाउनलोड र SnapTube अनुप्रयोग हो कसरी राम्रो आफूलाई साबित गरेको छ. आफ्नो फोनमा SnapTube स्थापित गर्ने थुप्रै मानिसहरूले यो अनुप्रयोग छ कृतज्ञ छन् भने.
SnapTube अनुप्रयोगले तपाईँलाई भिडियो डाउनलोड गर्न पहुँच दिनेछ, टिभी शो, संगीत भिडियो क्लिप र YouTube मा धेरै तत्काल. यो अचम्मको आफ्नो मनपर्ने च्यानलहरू भिडियो को एक संग्रह छ छैन गर्न? त्यसैले, तपाईं पछि ती सबै कुनै पनि समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ र कहीं.
के को SnapTube सक्षम गर्छ?
त्यहाँ बाहिर त्यहाँ Android को लागि धेरै YouTube डाउनलोडर भिडियो अनुप्रयोगहरू छन्, तर तिनीहरूलाई केही छैन रूपमा SnapTube अनुप्रयोग रूपमा राम्रो हो. SnapTube भिडियो डाउनलोडर अनुप्रयोगहरू मध्ये एक छ यो धेरै भव्य सुविधाहरू आउन गर्नुपर्छ रूपमा विचार गर्नु पर्छ कि.
तपाईं SnapTube अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु अघि, म SnapTube अनुप्रयोग लागि के गर्न सक्छ बारेमा केही जानकारी साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ. SnapTube तपाईं तत्काल एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा YouTube बाट भिडियो डाउनलोड गर्न मद्दत गर्छ.
SnapTube प्रयोग गरेर भिडियो डाउनलोड, तपाईं गुणस्तर चिन्ता गर्न आवश्यक छैन. SnapTube आफ्नो आवश्यकता आधारित डाउनलोड गर्न तपाईं चाहनुहुन्छ कि भिडियो गुणस्तर चयन दिनु हुनेछ.
SnapTube तपाईं भिडियो गुणस्तर चयन गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ रूपमा, तपाईं कम गुणस्तर वा उच्च परिभाषा गुणवत्ता छनोट गर्न सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, SnapTube तपाईं भिडियो डाउनलोड गर्न सीमा दिन छैन. यो तपाईं तपाईं धेरै रूपमा भिडियो डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ.
लागि निःशुल्क SnapTube अनुप्रयोग प्रयोग भिडियो डाउनलोड
तपाईं एन्ड्रोइड ग्याजेटहरू आफ्नो पीसी प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भनेर थाहा गर्न? हामी हेर्दै भिडियो जस्तै हाम्रो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन मा धेरै कुराहरू अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ, ब्राउजिङ इन्टरनेट, लेखन इमेल र धेरै.
आफ्नो स्मार्टफोन बाट स्ट्रिम भिडियो तपाईं यसलाई कहीं र कुनै पनि समयमा गर्न सक्नुहुन्छ रूपमा गर्न पक्कै रमाइलो र सजिलो छ. सबै भन्दा ठूलो साइटहरू मध्ये तपाईं स्ट्रिम र निःशुल्क भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ YouTube छ. त्यहाँ भिडियो विभिन्न विभाग तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ छन्, DIY जस्तै, हास्यास्पद क्लिप, एनिमेसन, संगीत भिडियो, छोटो चलचित्र, आदि.
YouTube मा निःशुल्क सबै भिडियोहरू प्रदान. यो भनेको तपाईंले स्ट्रिम र खरिद बिना YouTube मा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं गर्न आवश्यक सबै इन्टरनेट जडान छ.
के तपाईं इन्टरनेट जडान छ भने, तर तपाईं हेर्न समय छैन? या शायद तपाईं आफ्नो मनपर्ने बैंड र गायक को भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ? SnapTube अनुप्रयोग लागि यो गर्न सक्नुहुन्छ.
SnapTube अनुप्रयोग तपाईं एक सरल तरिका मा नि: शुल्क YouTube मा आफ्नो मनपर्ने बैंड र गायक वा अन्य भिडियोहरू संगीत क्लिप डाउनलोड दिनु हुनेछ. त्यसैले, तपाईं पछि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईं इन्टरनेट पहुँच छैन तापनि. भिडियो सबै आफ्नो स्मार्टफोन भण्डारण गरिनेछ.
SnapTube थुप्रै भिडियो साइटहरु समर्थन
YouTube मा मात्र वेबसाइट भिडियो प्रदान गर्दछ छैन. त्यहाँ स्ट्रिम र YouTube भन्दा अन्य भिडियो हेर्न वेबसाइट धेरै छन्, यस्तो Vimeo रूपमा, दाखको बोट, VIDIO, अस्वीकरण, Dailymotion र धेरै. YouTube जस्तै, ती वेबसाइटहरूमा सबै भिडियोहरू हेर्न मुक्त छन्.
के म भन्न जाँदैछु SnapTube पनि आवेदन ती साइटहरु समर्थित छ कि छ. यसरी, हामीलाई विभिन्न साइटबाट भिडियो हेर्न को लागि यो सजिलो छ.
के तपाईं भिडियो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, तर भिडियो वेबसाइट SnapTube मा छैन? SnapTube विकासकर्ताहरूले यसलाई बारेमा विचार. तिनीहरूले तपाईं स्वयं आफ्नो मनपर्ने वेबसाइट थप्न अनुमति दिन्छ सुविधा थपेका छन्. तपाईं पछि स्वयं भिडियो स्रोत थप्न, तपाईं डाउनलोड यसलाई देखि भिडियो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
SnapTube संग पत्ता लगाउनुहोस् लोकप्रिय भिडियो
तपाईंले हालसालै लोकप्रिय भएको छ कि अद्यावधिक भिडियो को लागि देख रहे? SnapTube यो तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ.
SnapTube अनुप्रयोगले लोकप्रिय भिडियो फेला सजिलो छ. वास्तबमा, SnapTube लोकप्रिय भिडियोहरूको लागि एक खण्ड छ. लोकप्रिय भिडियो खण्ड तपाईं आफ्नो देशमा लोकप्रिय छ कि भिडियोको बारेमा अद्यावधिक दिनेछु. यो खण्ड स्वतः प्रवृत्ति निम्न नियमित अद्यावधिक.
SnapTube तपाईं तत्काल लोकप्रिय भिडियो फेला मद्दत गर्छ. यो साँच्चै तपाईं लोकप्रिय भिडियो प्राप्त गर्न थप प्रयास प्रयोग गर्न आवश्यक छैन देखि एक लाभ छ. अर्को शब्दमा, SnapTube तपाईं वरिपरि जाँदै छ के अद्यावधिक प्राप्त गर्न आफ्नो बाटो सरल. अचम्मको यसलाई छैन?
शेयर भिडियो मित्र संग डाउनलोड
साझेदारी मायालु छ, कि मान्छे भन्नुभयो के. यो साचो हो. किन? कहिलेकाँही, हामी SnapTube अनुप्रयोग मा भिडियो हेर्न गर्दा, हामी हाम्रो मित्रहरूलाई साथै हेर्न चाहन्छन् कि एक प्रेरक भिडियो फेला. हामीले भिडियो प्रयोग अरूलाई प्रेरित गर्न खोज्नुभएको जस्तो यो हो.
जब तपाईं अवस्थामा छन्, तपाईं बस तपाईं साझेदारी सुविधा प्रयोग गरेर SnapTube मा हेर्दै छन् भिडियो साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई तपाईंले आफ्नो सामाजिक मिडियामा भिडियो साझेदारी गरेर अरूलाई आनन्द साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ SnapTube को सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू कसैको.
Snaptube कसरी सामाजिक मिडियामा भिडियो साझेदारी गर्न विकल्प दिन्छ, यस्तो WhatsApp रूपमा, फेसबुक, इमेल, Twitter र धेरै. यो Snaptube प्रयोग गरेर भिडियो साझेदारी गर्न धेरै सरल छ. बस तल मा शेयर प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले भिडियो साझेदारी गर्न तरिकामा धेरै देख्ने. सम्झनु, साझेदारी मायालु छ!
डाउनलोड HD भिडियो SnapTube प्रयोग
तपाईं छिटो इन्टरनेट जडान हुँदा स्ट्रिमिङ भिडियो साँच्चै सजिलो छ. तर यो आफ्नो इन्टरनेट जडान राम्रो छिटो छैन भने भिडियो अफलाइन हेर्न थप सहज छ. म भिडियो हेर्दै गर्दा बफर जस्तै कुनै पनि अवरोध रुचि छैन विश्वास, दायाँ? यो कथा को मुख्य भागमा आउँछ विशेष गरी जब.
SnapTube तपाईं विभिन्न गुणहरू भिडियो डाउनलोड गर्न विकल्प दिन्छ. लागि HD गुणवत्ता कम भिडियो डाउनलोड गर्न सम्भव छ. यसले केही सरल चरणमा गर्न सकिन्छ छ.
एक पटक तपाईं SnapTube आवेदन मा HD भिडियो डाउनलोड, तपाईं यसलाई आफ्नो साथीहरूसँग अफलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ. यो साथीहरूसँग यो हेर्न पक्कै धेरै रमाइलो छ, दायाँ?
तपाईंको पसंदीदा बैंड र गायक संगीत क्लिप्स प्राप्त
तपाईं Coldplay को समाचार भिडियो क्लिप देखेको छु? तपाईं आफ्नो मनपर्ने गायक वा बैंड संगीत क्लिप को एक संग्रह छन्?
तपाईं आफैलाई एक गायक वा दल एक ठूलो प्रशंसक कल भने, यसलाई पनि आफ्नो संगीत क्लिप को संग्रह गर्न एकदम साधारण छ, आफ्नो एमपी -3 फाइल वा डीभिडी छेउमा. Luckily, धेरै गायक र बैंड YouTube मा आफ्नो भिडियो क्लिप पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ र तिनीहरूले हेर्न मुक्त छन्.
तथापि, यसलाई हामी हाम्रो मन पर्ने भिडियो क्लिप हेर्न चाहनुहुन्छ भने एकदम troublesome छ तर हामी इन्टरनेट जडान. हाम्रो मन पर्ने ब्याण्ड र गायक देखि भिडियो क्लिप हेर्न एक सरल तरिका तिनीहरूलाई सबै डाउनलोड छ. तर कसरी YouTube मा भिडियो डाउनलोड गर्न?
Snaptube भिडियो डाउनलोडर उदाहरणका लागि भिडियो डाउनलोड गर्न सम्बन्धित सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ. यो तपाईं आफ्नो मनपर्ने गायक र बैंड भिडियो क्लिप डाउनलोड गर्न मद्दत तपाईं आफ्नो Android उपकरणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो भिडियो डाउनलोडर छ. Snaptube भिडियो डाउनलोडर रूपमा गुणस्तर बारेमा कुनै चिन्ता तपाईं विभिन्न गुणस्तर भिडियो डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, 144p देखि 0r पनि 2K भिडियो 1080p गर्न.
आफ्नो राम्रो बैंड र गायक निःशुल्क Snaptube भिडियो डाउनलोडर प्रयोग गरेर भिडियो क्लिप डाउनलोड र तपाईंको साथी बिना अफलाइन आनन्द.
SnapTube: Android को लागि सर्वश्रेष्ठ एमपी -3 डाउनलोडर
संगीत सुन्दै हाम्रो मन शान्त र ताजा बनाउँछ. यो पनि हाम्रो मुड परिवर्तन, सकारात्मक नकारात्मक देखि. पनि, संगीत हामी गरिरहेका छन् काम गर्न सादर हाम्रो रचनात्मकता बढाउन सक्छ, यस्तो चित्रकला रूपमा, लेखन, वा नृत्य. तथापि, फरक संगीत फरक परिणाम नेतृत्व गर्नेछन्. त्यसैले, संगीत कस्तो तपाईं सुन्न चाहनुहुन्छ?
संगीत कुरा, कुनै कुरा तपाईं सुन्न विधा, त्यहाँ एक सरल प्रश्न छ, “तपाईं आफ्नो लाइब्रेरी कसरी अपडेट गर्छन्?” हामी तपाईंलाई मूल संस्करण खरीद गरेर गायक वा बैंड समर्थन गर्न सिफारिस. तर, तपाईं मूल संस्करण खरीद गर्नु अघि गीत पूर्वावलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं मदत गर्न सक्छ कि Android को लागि एक mp3 डाउनलोडर अनुप्रयोग हो, Android को लागि SnapTube एमपी -3 डाउनलोडर.
Android को लागि SnapTube एमपी -3 डाउनलोडर तपाईं SoundCloud वा YouTube बाट एमपी -3 डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ. जब तपाईं YouTube बाट एमपी -3 डाउनलोड, Snaptube स्वचालित रूपमा अडियो स्वरूप भिडियो रूपान्तरण हुनेछ. तपाईं यस सुविधाको लागि प्लगइन आवश्यक छैन. सबै एक प्याक छ. यो पनि एमपी3वा M4A ढाँचामा डाउनलोड गर्न विकल्प दिन्छ. यो अचम्मको छ?
SnapTube संग डाउनलोड संगीत तपाईँले अनुभव दिनेछु यसलाई स्मार्टफोन मा एमपी -3 डाउनलोड गर्न कति सजिलो. तपाईं सीधा संगीत अडियो पार्श्व गर्न सक्नुहुन्छ. पनि, तपाईं हस्तान्तरण र यो ल्यापटप वा म्याक मा प्ले गर्न सम्भव छ. एकदम आकर्षक, छैन यो छ? कसरी डाउनलोड गर्ने SnapTube एमपी -3 डाउनलोडर थाहा पढेर राख्न.
किन SnapTube विशेष
बस अन्य भिडियो डाउनलोडर आवेदन जस्तै, SnapTube YouTube र अन्य भिडियो साइटहरु मंच बाट भिडियो डाउनलोड गर्न सक्षम छ. यो पनि स्वतः रुपान्तर द्वारा YouTube बाट अडियो डाउनलोड गर्न मद्दत गर्छ. SnapTube अन्य भिडियो डाउनलोडर आवेदन जस्तै हो भने, के यो अन्य भिडियो डाउनलोडर त्यसपछि आवेदन भन्दा फरक बनाउँछ?
अन्य अनुप्रयोगमा, तपाईं शीर्षक द्वारा भिडियो खोजी गर्न छ. तपाईं सही किवर्ड छैन भने, के तपाईं खोजिरहेको भिडियो स्क्रोल गर्न समय खर्च हुनेछ. SnapTube लागि गर्दा, तपाईं बस श्रेणी मा आधारित भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ. श्रेणी ट्याबमा जानुहोस् र तपाईं के खोज्दै छन् भनेर भिडियो फेला.
SnapTube आवेदन आफ्नो खोज्ने सजिलो हुन्छ गर्नेछ जो केही श्रेणी प्रदान गरेको छ. श्रेणी संगीत हो, खेल, जीवन शैली, पाल्तु जनावर र, मनोरञ्जन, सिनेमा, समाचार, खेल, प्रविधि र पनि शिक्षा. त्यसैले देखापर्ने भिडियो थप विशिष्ट हुनेछ.
श्रेणी भिडियो तपाईंलाई टिभी हेरेर मन गर्नेछ. यो तपाईं अन्य विभाग तपाईंलाई रुचि छैन सक्छ भिडियो संग विचलित भइरहेको बिना आफ्नो आवश्यकता अनुरूप कि फरक च्यानल छ जस्तो छ.
छेउमा भिडियो डाउनलोड, SnapTube पनि पुस्तकचिनो भिडियो गर्न अनुमति दिन्छ. बस मामला मा भनेर तिनीहरूलाई पछि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ. यो बुकमार्क सुविधा तपाईंलाई डाउनलोड गर्न वा हेर्न चाहन्छन् भिडियो सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छ, जब तपाईं यो पाएका छन् तर तपाईं यसलाई के गर्न सक्दैन. त्यसैले, बरु यसलाई थप एक पटक खोज को, तपाईं यसलाई बुकमार्क गर्न सक्नुहुन्छ.
लोकप्रिय ट्याब सुविधा पनि SnapTube चढाएको अर्को कुरा हो. यो सुविधा धेरै मानिसहरूले हेरिरहेका छन् कि भिडियो बारेमा अद्यावधिक दिनेछु. जब तपाईं जान्न चाहन्छु भिडियो के लोकप्रिय वा भाइरल छ, बस SnapTube यो लोकप्रिय ट्याब जाँच.
Android को लागि SnapTube: तपाईंलाई थाहा हुन जरुरी सबै
तपाईं आफ्नो साथीहरूसँग अफलाइन यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर SnapTube तपाईं भिडियो र अडियो डाउनलोड गर्न निःशुल्क पहुँच दिन्छ. भिडियो र अडियो डाउनलोड, तपाईं इन्टरनेट जडान बिना सबैतिर र कुनै पनि बेला प्ले गर्न सक्नुहुन्छ.
भिडियो साझेदारी छ SnapTube भिडियो डाउनलोडर अर्को क्षमता. गर्छन् तिनीहरूलाई तपाईं साझेदारी भिडियो संग प्रेरित गर्न. यो साझेदारी सुविधाहरू धेरै तरिकामा गर्न सकिन्छ, इमेल जस्तै, WhatsApp, लाइन, twitter, आदि.
SnapTube भिडियो र अडियो फाइलहरू सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता प्रदान. यो तपाईं आफ्नो आवश्यकता आधारित फाइल गुणस्तर चयन गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ. यो पनि तपाईं4हजार भिडियो गुणस्तर मा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ.
तपाईं जो तपाईं पहिले सुरक्षित भिडियो फेला पार्न लागि सजिलो बनाउनेछ SnapTube मा भिडियो बुकमार्क. यो तपाईं पछि हेर्न चाहन्छन् कि तपाईं आफ्नो मनपर्ने भिडियो सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छ.
तपाईं SnapTube देखि डाउनलोड भिडियो र अडियो फाइल अन्य ग्याजेटहरूमा खेल्न सक्षम छ, पीसी वा म्याक जस्तै. तपाईं समस्या फेला भने पीसी वा म्याक भिडियो डाउनलोड, SnapTube आफ्नो समाधान हुन सक्छ.
ठिक छ! त्यसैले कसरी Android को लागि डाउनलोड गर्न SnapTube?
तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ डाउनलोड SnapTube र YouTube बाट भिडियो डाउनलोड गर्न आफैलाई प्रयास? यदि यति, हामी तपाईंलाई SnapTube कसरी डाउनलोड गर्ने को सरल कदम देखाउने. कृपया स्थापना सजिलै गर्न सकिन्छ राम्ररी त ट्युटोरियल पढ्न.
SnapTube मूलतः जो यो केवल Android उपकरणहरू लागि काम गर्दछ भन्ने हो एक Android अनुप्रयोग, स्मार्टफोन र ट्याब्लेट सहित.
के तपाईं जान्नु आवश्यक SnapTube गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ कि छ. किन? गुगल सबै भिडियो डाउनलोडर आवेदन प्रतिबन्ध. त्यसैले तपाईं प्ले स्टोर Google मा पाउनुहुनेछ.
डाउनलोड गर्न कहाँ SnapTube अनुप्रयोग, त्यसपछि? तपाईं SnapTube आवेदन यसको आधिकारिक वेबसाइट वा गएर डाउनलोड गर्न सक्छन् snaptubepc.org. त्यसपछि, तपाईं वेबसाइट ले डाउनलोड पछि, तपाईं आफ्नो ग्याजेटहरू मा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ.
तापनि यसलाई Android उपकरणहरूमा खोटरहित ढंगमा चल्छ, तपाईं न्यूनतम आवश्यकताहरू र के तपाईं डाउनलोड SnapTube आवेदन अघि र आफ्नो Android उपकरणहरूमा यो स्थापना गर्न आवश्यक पढ्न पर्छ.
SnapTube अनुप्रयोग डाउनलोड अघि सेटअप
तपाईं SnapTube अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु के गर्नुपर्छ के? यो धेरै प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सबैभन्दा सोधे प्रश्न छ.
तपाईं Android उपकरणहरू लागि SnapTube अनुप्रयोग डाउनलोड र स्थापना गर्नु अघि, तपाईं न्यूनतम आवश्यकताहरू जाँच गर्नुपर्छ. तिनीहरू के हुन? तलको सूची जाँच.
SnapTube ओएस संग Android उपकरणहरूमा सजिलै चल्छ 4.0 (आइसक्रिम स्यान्डविच) वा पछि. स्थापना गर्नु अघि आफ्नो एन्ड्रोइड OS संस्करण जाँच.
तपाईंको निःशुल्क आन्तरिक मेमोरी जाँच. बनाउन तपाईं SnapTube आवेदन आफ्नो Android उपकरणमा स्थापना गर्न पर्याप्त स्मृति छ भनेर निश्चित.
प्ले गएर पसल छ भनेर Google बाट छैन APK स्थापना गर्न सुविधा सक्षम सुरक्षा > गोपनीयता > अज्ञात स्रोत, त्यसपछि यो सुविधा सक्रिय.
SnapTube आवेदन स्थापना गर्न कदम
तपाईंले माथि सबै आवश्यकताहरु पढ्न गरेपछि, तपाईं SnapTube आवेदन स्थापना गर्न लागि अहिले सुरक्षित. स्थापना SnapTube धेरै सजिलो छ. तपाईं एक्लै यो गर्न सम्भव छ. तर हामी अझै पनि तपाईं मामला मा एक निर्देशन दिन तपाईंले यसको आवश्यकता.
को बाट SnapTube APK डाउनलोड Snaptube APK डाउनलोड पृष्ठ वा यो दर्पण Snaptube डाउनलोड तपाईँको मोबाइल उपकरणबाट सीधा नवीनतम snaptube APK प्राप्त गर्न पृष्ठ.
तपाईं बस डाउनलोड गरेका छन् कि SnapTube APK पत्ता लगाउन र यसलाई दुई पटक ट्याप गर्नुहोस्.
ट्याप गर्नुहोस् स्थापना स्थापना प्रगति सुरु गर्न तल दायाँ मा. यसलाई केही मिनेट लाग्न सक्छ. कृपया धैर्य.
ट्याप गर्नुहोस् खुला SnapTube आवेदन र भिडियो डाउनलोड प्रयोग सुरु गर्न.
एक पटक तपाईँले आफ्नो मोबाइल उपकरणमा SnapTube अनुप्रयोग स्थापना गर्न सकियो, तपाईं भिडियो YouTube वा अन्य साइटहरु देखि डाउनलोड SnapTube द्वारा प्रदान सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. SnapTube तपाईं चाहनुहुन्छ सबै भिडियो निःशुल्क डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ.
पीसी विन्डोज र म्याकका लागि SnapTube
धेरै मानिसहरू SnapTube आवेदन सबै भन्दा राम्रो भिडियो डाउनलोड ग्राहकहरु मध्ये एक छ भन्ने कुरामा सहमत. यसलाई YouTube बाट भिडियो डाउनलोड गर्न सक्ने क्षमता छ, फेसबुक, र अन्य साइटहरु सबैलाई चकित छ. यो किनभने SnapTube सबैलाई बनाउँछ कि सादगी को हो यो अनुप्रयोग प्रेम.
त्यस तथ्यको कारण, धेरै मानिसहरू पीसी Windows वा म्याक मा SnapTube स्थापना गर्न एक तरिका फेला पार्न सुरु. तर, यो अनुप्रयोग पीसी Windows वा म्याक मा स्थापना सम्भव छ गर्न? जवाफ हो छ. यो पीसी Windows वा म्याक लागि डाउनलोड र SnapTube अनुप्रयोग स्थापना गर्न सम्भव छ. त्यसपछि, हामी यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तलको विवरण पढ्न.
तापनि SnapTube Android यन्त्र छ, यो SnapTube पीसी Windows वा म्याक मा चलान सक्दैन होइन. त्यहाँ हामीलाई सजिलै पीसी Windows वा म्याकमा एन्ड्रोइड अनुप्रयोग चलाउन सक्षम एक चाल छ. त्यसो गर्न, हामी एन्ड्रोइड Emulator आवश्यक. त्यहाँ हामी प्रयोग गर्न सक्ने धेरै Android emulators छन्. हामी तपाईंले प्रयोग गर्न सिफारिस Bluestack एन्ड्रोइड Emulator.
तपाईं पछि डाउनलोड र Bluestack एन्ड्रोइड emulator स्थापना, तपाईं मा SnapTube APK डाउनलोड गर्न सक्छन् डाउनलोड पृष्ठ र Bluestack मा स्थापना. त्यसपछि, SnapTube आवेदन पीसी Windows वा म्याक लागि तयार छ. पूर्ण ट्युटोरियल लागि, you can visit the snaptube for PC Windows or म्याकको लागि SnapTube page.
SnapTube APK: डाउनलोड SnapTube APK नवीनतम संस्करण 2017 वा SnapTube पुराना संस्करण
SnapTube गुगल प्रतिबन्धित छैन, त्यसैले तपाईं गुगल प्ले स्टोरमा SnapTube पाउन सक्षम हुन सक्दैन. त्यसैले, हामी तपाईँलाई SnapTube APK अफलाइन स्थापना भनेर बाट डाउनलोड गर्न सक्छन् प्रदान Snaptube डाउनलोड Page.
तपाईं SnapTube आवेदन डाउनलोड गर्नु अघि, तपाईँले तल आवेदन बारेमा जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ.
नवीनतम SnapTube अनुप्रयोग संस्करण : SnapTube 4.24.0.9411
प्याकेज नाम : com.snaptube.premium
फाइल साइज : 8.7एमबी
एन्ड्रोइड ओएस (आवश्यक) : 4.0 वा पछि
लाइसेन्स : मुक्त
कसरी विभिन्न ग्याजेटहरू लागि SnapTube स्थापना गर्न
SnapTube पक्कै राम्रो निःशुल्क भिडियो डाउनलोडर छ. धेरै मानिसहरू आफ्नो ग्याजेटहरू यो अनुप्रयोग चाहनुहुन्छ देखि, त्यसैले हामी तपाईंलाई Android उपकरणहरूमा SnapTube स्थापना गर्न सरल ट्युटोरियल लेख्न, ट्याब्लेट, वा स्मार्टफोन, आइओएस उपकरणहरू, iPhone र iPad जस्तै.
हामी पनि पीसी Windows को लागि SnapTube डाउनलोड र स्थापना गर्ने बारे ट्युटोरियल दिनेछु (8, 8.1, 10), ल्यापटप वा म्याक.
Android को लागि SnapTube (स्मार्टफोन वा ट्याबलेट)
हामी तपाईंलाई सरल चरणमा Android उपकरणहरू लागि SnapTube स्थापना गर्न ट्युटोरियल प्रदान गरेको छ. स्पष्ट कदम हेर्न कृपया एन्ड्रोइड ट्युटोरियल पृष्ठमा जानुहोस्: Android को लागि SnapTube.
पीसी Windows को लागि SnapTube (8/8.1/10) वा ल्यापटप लागि SnapTube
यो पीसी Windows वा ल्यापटप लागि SnapTube स्थापना गर्न सम्भव छ. तपाईं ट्युटोरियल जान्न चाहन्छु भने, को विवरण कदम लागि पीसी Windows SnapTube स्थापना ट्युटोरियल जाँच: पीसी Windows को लागि SnapTube or Laptop.
SnapTube Mac मा सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ. कसरी सम्भव छ? पूर्ण ट्युटोरियल लागि म्याक स्थापना पृष्ठमा पूरा ट्युटोरियल पढ्नुहोस्: म्याकको लागि SnapTube.
iPhone को लागि SnapTube / iOS को लागि SnapTube / आईप्याडका लागि SnapTube
SnapTube आईफोन लागि हो, आइओएस वा iPad उपलब्ध? पूर्ण जानकारीको लागि यो पृष्ठमा पाउन: iPhone वा iPad को लागि SnapTube.
त्यो SnapTube आवेदन बारेमा सबै जानकारी छ. जब आउँदै SnapTube बारेमा नयाँ जानकारी हामीले नियमित रूपमा यो पृष्ठ अपडेट हुनेछ. तपाईं सोध्नु केहि छ भने, कृपया तलको टिप्पणी बक्समा आफ्नो प्रश्न ड्रप.
As we have mentioned earlier that every update always bring patches for the bugs and new features. तिनीहरू के हुन?
साझेदारी मायालु छ!